MADDEN NFL MOBILE APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Madden NFL MOBILE
Madden NFL MOBILE APK ကို
Madden NFL MOBILE ဝန်းကျင်တွင်သင်၏တွင် TEAM ဆောနိုင်စွမ်းနဲ့ Dynamic NFL ရာသီ၌ယှဉ်ပြိုင်ဂိမ်း, AND NEW ထိုးစစ်စနစ်ဖြင့်, နောက်သို့အစဉ်အမြဲထက် သာ. ကောင်း၏။
တစ်ဦး NFL GM ကဖြစ်လာနှငျ့သငျပြောင်းလဲနေသော NFL ရာသီမှတဆင့် play အဖြစ် Super Bowl ရန်သင့်အဖွဲ့သည်ယူပါ။ သငျသညျ NFL စူပါစတားများနှင့် Legends သင့်ရဲ့အဖွဲ့တည်ဆောက်သည့်အခါနောက်ဆုံးမှာအမှန်တကယ် NFL MVP ကိုယ်တော်တိုင်ပက်ထရစ် Mahomes နှင့်အတူချွတ် facing, က Madden ရဲ့မာစတာအပေါ်ကိုယူပါ။ Arena H2H သို့မဟုတ် Overdrive အတွက်သူငယ်ချင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နှငျ့သငျနေ့စွဲဖို့အနက်ရှိုင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုက Madden NFL မိုဘိုင်း၌သင်တို့၏ NFL ခရီးသတ်မှတ်အဖြစ် Assist Co-op နှင့်အတူလမ်းတစ်လျှောက်အခြားသူများကိုကူညီပေးသည်။
သင်တို့သွားရာလမ်းကို Super Bowl င့်ဖို့ Start
သင့်ရဲ့ NFL ဂိမ်းကိုရွေးချယ်ပါနှင့် GM ကအဖြစ်ကိုကျော်ယူပါ။ ကစားသမားများ Sign သင် Super Bowl ရန်သင့်အဖွဲ့သည် ယူ. တစ်ခု NFL မင်းဆက်ဖန်တီးအဖြစ် NFL ရာသီတစ်လျှောက်လုံးပြောင်းလဲနေသောအခြေအနေတွေရင်ဆိုင်နေချိန်မှာအသစ်ကကစားသမားသော့ဖွင့်ဖို့နေ့စဉ်ရည်ရွယ်ချက်များပြီးပါက, ရှေးရိုးစွဲကြီးဖြစ်တဲ့နှင့်အတူကိုင်တွယ်။
အားလုံး-NEW Madden Master Collection
ချွတ်ရင်ဆိုင်ရနှင့်သင်တစ်ဦးချင်းစီက Madden မာစတာသော့ဖွင့်ဖို့ယှဉ်ပြိုင်အဖြစ်ယနေ့ NFL စူပါစတားများနှင့်ခေတ်ဟောင်း၏စိတ်ညစ်စရာ NFL Legends အနိုင်ယူ။ ထိုအခါက Madden NFL မိုဘိုင်း၏အစစ်အမှန် MVP ဖြစ်လာမှပက်ထရစ် Mahomes စစ်ချီသွားပါ။
ကျွန်တော် PLAYSTYLE FOR တစ်ဦးက SCHEME
Spread, Smashmouth အနောက်ကမ်းခြေနှင့်ဒေါင်လိုက်နဲ့တူချင်းစီသစ်ကိုထိုးစစ်အစီအစဉ်နှင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုပြည့်စုံသောတောထဲကနေခွဲထုတ်။ သင် scoreboard အပေါ်ရမှတ်ကိုတင်နှင့်သင့်ပြိုင်ဘက်ကိုဆင်းယူမည်သို့စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်ပါတယ်။
Co-op Assist နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ NFL ခရီးအပေါ်တစ်ဦးတည်းဘယ်တော့မှပါပဲ။ က Madden မာစတာသို့မဟုတ်ပြည့်စုံရည်ရွယ်ချက်များကြောင့်သော့ဖွင့်ဖို့လိဂ်အိမ်ထောင်ဖက်ထံမှအကူအညီတောင်းကိုမေးပါ။ သငျသညျကိုအခြားသူများမှတစ်ဦးကူညီပေးနေလက်ကိုပေးပါနှင့် Super Bowl-အနိုင်ရအသင်းများကိုတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်သည့်အခါကိုရွေးချယ်ပါ။ သင့်ရဲ့က Madden NFL ရာသီယခုစတင်သည်!
တစ်ဦး persistent အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု (ကွန်ယက်ကိုအခကြေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်) လိုအပ်သည်။ EA ရဲ့ Privacy & Cookie ပေါ်လစီများနှင့်အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်များ၏လက်ခံမှုလိုအပ်သည်။ EA ၏နှင့်၎င်း၏မိတ်ဖက်များအတွက်ကြော်ငြာပါရှိသည်။ In-ဂိမ်းကြော်ငြာလည်းပါဝင်သည်။ (အသေးစိတ်ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေး & Cookie ပေါ်လစီကိုကြည့်ပါ) တတိယပါတီ analytics နည်းပညာမှတဆင့်ဒေတာစုဆောင်း။ (အသေးစိတ်ကိုသီးသန့်လုံခြုံရေး & Cookie ပေါ်လစီတွင်ကြည့်ပါ) တတိယပါတီကြော်ငြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် analytics နည်းပညာမှတဆင့်ဒေတာစုဆောင်း။ 13 ကျော်တစ်ဦးပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်အင်တာနက်နှင့်လူမှုကွန်ယက်ဆိုဒ်များတိုက်ရိုက်လင့်ခ်များပါရှိသည်။ ဒီ app ကို Google Play ဂိမ်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ Google ကနေ log out သင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားမျှဝေချင်ကြဘူးလျှင်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီဂိမ်းန်ဆောင်မှုများ Play ။
All-သစ်ကိုပုံရိပ်ယောင်များ, အင်္ဂါရပ်တွေနှင့်ထို့ထက် ပို. နှင့်အတူထုပ်ပိုး, အစဉ်အဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံး update ကိုမှကြိုဆိုပါ၏! တစ်အကြိုက်ဆုံး NFL အဖွဲ့ Pick နှင့်အတွေ့အကြုံများမှလယ်ပြင် hit:
•ရာသီ - သူတို့နောက်ကျောနေပါပြီ! သင်အကြိုက်ဆုံး NFL အသင်း၏ GM ကဖြစ်လာနှင့် Super Bowl သူတို့ကိုယူပါ။
•က Madden မာစတာ - သင်သည်သင်၏မင်းဆက်တည်ဆောက်အဖြစ် Ultimate ဒီနေ့ရဲ့စူပါစတား၏အဖွဲ့နှင့်မနေ့ကရဲ့ Legends တည်ဆောက်
83.66 ကို MB